SAWIRO: Waa sidee xaalada Maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xiran Suudaan ? | warsanradio baydhabo
Home WARARKII MAANTA	SAWIRO: Waa sidee xaalada Maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xiran Suudaan ?
written by siid cali ateera 28/01/2019
Danjiraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Suudaan Cabdirisaaq Axmed Shoole oo kulan la qaatay Taliyaha Ciidanka Asluubta Suudaan Sareeye Guud Xaatim Alnuur Cabdulqaadir ayaa kala hadlay xaaladda maxaabiis Soomaaliyeed oo ku jira xabsiyada Suudaan kaddib kormeer uu ugu tagay maxaabiis ku jirtay xabsiga Koobar.
Danjiraha ayaa uga mahad-celiyey Dowladda Suudaan fulinta codsigii Safaaradda ee ku aaddanaa in laga wareejiyo maxaabiista soomaaliyeed xabsigii hore ee ay ku jireen, loona wareejiyey xabsi kale oo ay codsadeen, arrintaas oo haatan ay fulisay Dowladda Suudan.
Dhankiisa, Taliyaha Ciidanka Asluubta Suudaan ayaa ammaanay hab-dhaqanka wanaagsan ee Ardayda iyo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku sugan Suudaan, waxa uuna tilmaamay in lix qof oo kaliya ay yihiin muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku jira xabsiyada dalka, taas oo noqonaysa mid aad u yar markii loo eego tirade guud ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan Dalka Suudaan.
Sarreya Guud Xaatim Alnuur Cabdulqaadir ayaa Safiirka uga warbixiyey muwaadiniinta Soomaaliyeed ee Lixda ah ee ku jira xabsiyada Suudaan, dacwadaha lagu soo oogay, xukunnada lagu riday iyo muddada ay haatan xiran yihiin.
Danjire Shoole ayaa u gudbiyey Taliyaha Ciidanka Asluubta Suudaan salaan iyo farriin uu uga siday dhiggiisa Soomaaliya Sarreeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac, taas oo ku saabsan xoojinta iskaashiga iyo wadashaqeynta labada ciidan.
SAWIRO: Waa sidee xaalada Maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xiran Suudaan ? was last modified: January 28th, 2019 by siid cali ateera
Dhageyso:-Doorasho Kursi ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka oo maanta ka dhacday magaalada Baydhabo.
DAAWO MUQAALKA SHEEKH CABDULBAASID SH,IBRAHIM DHALINYARO KU KOREY WANAAGGA AYAA KU SOCOTAA MUXAADARADAAN OO AAD KA U MACAAN
DHAGEYSO>Taliye Abdiraxmaan Timacade:Amni Darada Waxaa Keena Qaadka Oo Askarta Ay Ku Mashquulaan:
Dhageyso:-Waraysi gaar ah mid ka mid ah ganacsaatadii dhowaan ku hanti beelay dagaaalkii dhowaan Gobalka Baay>
Dhegeyso:-Gaadiidleyda Ka Howl gasha Gobolka Shabeelaha Hoose oo Mar Kale Ka Cabanaya Isbaarooleyda loo Xirey dareeska Dowlada